Vata fampangatsiahana frizidera amerikana mifangaro, vata fampangatsiahana tratra ho an'ny garazy - Nenwell
mamorona lanja lehibe kokoa noho ny vokatra
Nenwell dia manana vokatra fampangatsiahana avo lenta avo sy avo lenta mba hifanaraka amin'ny fangatahanao mahazatra
20 taona mahery ny traikefa momba ny vata fampangatsiahana napetraka. Nenwell dia manome vahaolana ho an'ny mpanjifa rehetra amin'ny vahaolana mangatsiaka sy marina amin'ny sehatry ny vata fampangatsiahana sy trano fandraisam-bahiny. Manatanteraka hatrany ny fampanantenanay izahay hoe "Hamorona lanja bebe kokoa noho ny fanirian'ny mpanjifa".
miaraka amin'ny tsy mitovy
Miaraka amin'ny fahitana iraisam-pirenena amin'ny sakany sy ny fahatsapana tsena mora tohina, Nenwell dia namolavola ireo vokatra vaovao na namboarina niaraka tamin'ny mpanjifa. Hialoha ny tsena, mba handraisana anjara amin'ny tsena sy tombom-barotra miaraka amin'ny mpanjifa miaraka.
Fahitana iraisam-pirenena, kitiho ny fitaomam-panahy
Mandray anjara amin'ny karazana fampirantiana hotely sy fampirantiana vata fampangatsiahana isan-taona. Izany dia mahatonga antsika ho matihanina kokoa sy ho mora tohina amin'ny fironana amin'ny tsena.
Ny fahaiza-mividy iraisam-pirenena dia mamela an'i Nenwell hanome sosokevitra sy haneho ireo vokatra amidy eran-tany ho an'ny mpanjifa ara-potoana Nomena ny mpanjifa ny fampahalalana marobe momba ny vokatra lehibe kokoa tamin'ny voalohany. Manampy ny mpanjifa hanararaotra ny fotoana voalohany amin'ny asa aman-draharaha.
fiaraha-miasa vavolombelona vavolombelona azo atao tsy manam-petra!
maotera mpankafy axial
maotera mpankafy volom-borona
condenser fantsona tariby
sakana amin'ny terminal
tongotra azo ovaina
Fividianana tsena avo lenta sy fahaiza-mikaroka ---- mpamatsy fiaraha-miasa miisa 500 miaraka amin'ny vokatra sy kojakoja fampangatsiahana maherin'ny 10.000. Anisan'izany ny kojakojan-tokantrano, ny kojakoja ary ny akora.
Vahaolana feno vata fampangatsiahana
ny trano fandraisam-bahiny sy fivarotana lehibe!
Fampiharana matihanina an-taonany maro, safidin'ny vokatra marobe ary famakafakana indostrialy marina no manome an'i Nenwell safidy haingana hanoroana ireo vokatra fampangatsiahana hena maitso sahaza indrindra. Mba hanatsarana ny fanamorana ny vokatra, fitsitsiana ny asa sy ny habaka! Mamolavola sary fanaovana sary ho an'ny mpanjifa hanome ny vahaolana tsara indrindra.
Mamolavola ho avy mamiratra miaraka amin'ny
Varotra in-10 ao anatin'ny telo taona
Tao anatin'izay taona lasa izay, Nenwell dia nanolotra tolo-kevitra momba ny fampandrosoana tsena mahomby ho an'ny mpanjifa samihafa, namboly ny mpanjifa ny traikefa vokatra fampangatsiahana, manampy ny mpanjifa hibodo haingana ny fizarana tsena! Ny sasany amin'ireo mpanjifanay dia nahatratra ny fitomboan'ny varotra haingana ao anatin'ny fotoana fohy amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'i Nenwell!
Avy amin'ny tovona ui- mamaritra ny fitaona ho avy mialohan'ny (anteriora) aôrisitry ny endriky ny mpanao, ny fototeny böt; ny tovana -of izay mamaritra ny mpanao (mpanao fahatelo amin'ny bika ambehivavy); ary ny tovana -s mamaritra ny ploraly Amin'ny alàlan'ny fanekena ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa dia manangana fifamatorana matanjaka amin'ireo mpanjifantsika sy mpamatsy anay izahay, mifantoka amin'ny fitomboana sy fahombiazana.